Politika · Febroary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Febroary, 2011
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Febroary, 2011
Frantsa:Fihetsiketsehana tao Parisy Manohitra ny Fitondrana Jadona ao Gabon
Afrika Mainty 28 Febroary 2011
Manodidina ny 7000 ireo olona nifamory teny an-dalambe tao Parisy renivohitra Frantsay mba haneho hevitra ho fanoherana ireo mpitondra jadona Afrikana sy ny governemanta Frantsay nampangaina ho niray tsikombakomba tamin'ireo fiondrana jadona Afrikana. ny -Sabotsy 26 Febroary 2011. Nanindahindra sora-baventy teo ivelan'ny tanànan'ny Filohan'i Gabon, izay mitentina 140 tapitrisa Euro ireo mpanao fihetsiketsehana.
Maoritania: Mipoaka ny Hetsik'ireo Mpandala Demaokrasia Ao Nouakchott
Nipoaka ny fihetsiketsehana tao Nouakchott, renivohitr'i Maoritania androany, taorian'ny fifanatonan'ireo tanora tany anaty aterineto mba hiantso fihaonambe, izay mitaky fanovàna ara-tsosialy, ara-politka ary ara-toekarena, sy fampitsaharana ny fitondra-miaramila ao Maoritania. Ao amin'ny Twitter, manome antsika fitantaràna ny natrehin-dry zareo maso nandritra ny andro.
Bahrain: Fanajàna ny Andro Fisaonana
Ny Zoma (25 Feb) dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ho 'Andro iray Fisaonana' an'ireo maritiora rehetra lavo nandritra ny Hetsi-panoherana tamin'ny Andron'ny Hatezerana ho an'i Bahrain, izay nanomboka tamin'ny 14 Febroary 2011. Misaintsaina ny amin'izay andro izay ireo mponin'ny aterineto.
Tonizia: Nametra-pialana ny praiministra taorian'ny vono-olona ny Asabotsy
Ity lahatsoratra ity dia fanadihadina manokana mikasika ny Revolosiona Tonizia taona 2011. Nametram-pialana ny praiminisitra vonjimaika Mohamed Ghannoushi taorian'ny fatiolona ny Asabotsy tao an-drenivohitra Tunis. Ny fifandonana niseho tamin'ny Zoma alina tao amin'ny lalana Habib Bourguiba, nitarika fahafatesan'olona telo nisy teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana. Narahina fampisehona...
Hanara-dia an'i Tonizia sy i Egypta va i Alzeria?
Ity lahatsoratra ity dia fitantarana manokana momba ny Fihetsiketseham-bahoaka taona 2011. Na dia teo aza ny fionganan'ny Filoha Toniziana Zine El Abidine Ben Ali, taorian'ny fikomiana sy ny fanerena ny Filoha Egyptiana Hosni Mubarak hiala, dia mbola tsy nidina an-dalambe ny mponina Alzeriana . Ireo andrana roa nataon'ny fandrindrana nasionaly ho...
Côte d’Ivoire: Fanentanana ao amin'ny Twitter mba hisarihana ny sain'Anderson Cooper
Nitana ny anjara asany ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices Anna Gueye tao anatina fanentanana vao hainagana handresena lahatra ny mpitatitra mora resen-dahatry ny CNN Anderson Cooper mba tena hijery ireo mpanohitra any amin'ireo firenena Afrikanina tahaka an'i Gabon sy Côte d’Ivoire, tahaka ny nataony tamin'ireo fikomiana tany Tonisia, Ejipta sy ny tontolo Arabo hafa.